देउवा सरकारमा आठ मन्त्री थपिदै,बुधबार सम्ममा को-को मन्त्री बन्दैछन? | News Dabali
देउवा सरकारमा आठ मन्त्री थपिदै,बुधबार सम्ममा को-को मन्त्री बन्दैछन?
September 3, 2017 | 4:53 pm
प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी बुधबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद गर्ने प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ। ‘राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्रीज्यूले तयारी थाल्नु भएको छ। बुधवारसम्ममा विस्तार हुन्छ,’प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो।
प्रधानमन्त्री देउवासँग शान्ति तथा पुनर्निमाण, वन तथा भूसंरक्षण, विज्ञान तथा प्रविधि र उद्योग मन्त्रालय बाँकी छन्। यी चारवटै बाँकी छँदै प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल ५० सदस्यीय छ। चार मन्त्री र चार राज्यमन्त्री राप्रपा प्रजातान्त्रिकबाट थपिएपछि देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् ५८ सदस्यीय बन्ने छ। जुन, देउवाले २०५२ सालमा बनाएको ५२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलभन्दा जम्बो मन्त्रिमण्डल बन्ने छ।